दराज को आधुनिक चेस्ट - फर्नीचर - प्रेरणा
कोटी: दराजको आधुनिक चेस्ट
ट्रेंडी पनि हुनुहोस्। के तपाईं अपार्टमेन्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? स्टाइलिश एक्सेसरीलाई नबिर्सनुहोस्, जसले डिजाइन कार्य मात्र पूरा गर्दैन। दराजको आधुनिक चेस्टको आज ठूलो माग छ। केहि को लागी, तिनीहरू शयनकक्ष, बैठक कोठा, हलवे तर बच्चाहरूको कोठामा एक आवश्यकता हो। हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै चीजहरू, थोरै ठाउँ। दराज को एक उपयोगी छाती धेरै परिवार को लागी यो समस्या समाधान गर्दछ। भण्डारण ठाउँको ग्यारेन्टी दिन तपाईं विभिन्न आकारहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको व्यावहारिक पक्षको साथसाथै, हाम्रा ड्ररहरूको चेस्टले पनि नवीनतम प्रवृत्ति र ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
तपाईंको बैठक कोठाको लागि दराजको छाती
मे २,, २०२० फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक
बैठक कोठाको लागि कुन ड्रेसर छनौट गर्नुहोस्? भर्खरका फेशन ट्रेंडहरू के हुन्, तपाईको छानाको ड्रॉरको लागि के सामानहरू छनौट गर्नुहोस् र अधिक हामी तपाईंलाई निम्न लेखमा सल्लाह दिनेछौं। हाल, तथाकथित ड्रअर संस्करणहरू, क्याबिनेटहरूसँग दराजहरूको चेस्ट, उच्च र संकीर्ण, फराकिलो र कम। उत्पादकहरूले वास्तवमै सबै ग्राहकहरूको सबै चीजहरूको बारेमा सोच्दछन्, त्यसैले तिनीहरू प्राय: तिनीहरूसँग आफूलाई अनुकूल बनाउने प्रयास गर्छन् र तिनीहरूलाई प्रशस्त विस्तृत प्रस्ताव गर्दछ […]
दराजको छाती छनौट गर्न समस्या भइरहेको छ? हामी तपाईंलाई सल्लाह दिनेछौं!
1 मार्च, 2018 फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक
यदि तपाईं हाल आफ्नो घर प्रस्तुत गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ र कुनै तरिकाले तपाईंसँग अझै केही भण्डारण ठाउँ छैन, तर ठूलो कोठामा पर्याप्त ठाउँ बढेको छैन, वा यो तपाईंको कोठामा फिट हुँदैन भने, निराश नहुनुहोस्। वार्डरोब एक मात्र समाधान होईन, त्यहाँ एक पनि धेरै व्यावहारिक छ - ड्रयरको छाती। यस सुन्दर फर्नीचरको टुक्राले यसको सौन्दर्य कार्यका साथै कार्यात्मक पूरा गर्दछ। यद्यपि, […]